Agaasimihii Aqalka Cad oo shaqada ka tagaya kadib khilaafka Trump • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Agaasimihii Aqalka Cad oo shaqada ka tagaya kadib khilaafka Trump
December 9, 2018 - By: Khalid Yusuf
John Kelly ayaa lagu wadaa inuu booska baneeyo dhamaadka sanadkan, xili todobaadyadii lasoo dhaafay uu gebi ahaan joogsaday xiriirkii tooska ahaa ee ka dhaxeeyey isaga iyo Madaxweynaha Donald Trump.
Kelly oo horey usoo ahaa Jeneraalka militari ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay lasoo shaqeenayey Trump, iyadoo xiligii xilka loo magacaabay uu jahwareer weyn ka jiray Aqalka Cad ee looga taliyo dalka Maraykanka.
Marar badan ayaa horey loo sheegay inuu xilka ka degi doonoJohn Kelly, waxaana horey buug laga qoray jahwareerka ka jira Aqalka Cad lagusheegay in Gen.Kelly uu ku tilmaamay Trump hogaamiye doqon ah, inkastoo uubeeniyey warkaasi laga qoray.
Xiriirka labada nin ayaa la sheegay inuu sii xumaaday todobaadyadii lasoo dhaafay oo ay gebi ahaan joojiyeen inay wadahadlaan.
Trump ayaa Sabtidii shalay warbaahinta u sheegay in maalmaha soo socda uu magacaabi doono ninka bedali doona Kelly, waxaana si weyn loohadal hayaa inuu magacaabi doonoxogheynta Madaxweyne kuxigeenka ninka lagu magacaabo Nick Ayers, ninkaasi ootaageero ka heysta qoyska Trump gaar ahaan gabadhiisa Ivanka Trump &ninkeeda Jared Kushner.